China Rubber enamathela, UV kagesi, shinning ukuphrinta, ukudluliswa kwamanzi detangler izinwele ibhulashi nge Intelliflex bristles ifektri abakhiqizi | Yongsheng
Rubber enamathela izinwele ibhulashi nge ezimibalabala ukuphrinta wit ...
UV kagesi, ukudluliswa kwamanzi, shinning ukuphrinta izinwele b ...
Ukumboza irabha, ugesi we-UV, ukuphrinta ukukhanya, amanzi ...
Rubber enamathela, ukudluliswa kwamanzi, UV gwedla kagesi h ...
Usizo lwabenza imisenenzi nxazonke izinwele ibhulashi lokushisa okuphezulu ...
Mini izinwele ibhulashi nge ezimibalabala iraba enamathela, UV ele ...
Umbala wenjoloba wokugoqa izinwele zakudala nge-design ...
Ukumbozwa kwerabha, ugesi we-UV, ukuphrinta okukhanyayo, ibhulashi lokudlulisa amanzi elenza ngamanzi nge-Intelliflex bristles
Izinto: ABS, TPR ， inayiloni,
Umbala: Okumnyama, okubomvu, okuluhlaza okwesibhakabhaka, okuphuzi, okuluhlaza okotshani,… ukwenza ngokwezifiso.
MOQ: 2400PCS / isitayela
Ukukhiqizwa kwangaphambilini ------ isampula ------ isiqinisekiso-Izinto ------ ukuthenga-Ingxenye ------ ingxenye ------ Injection-Quality ------ ukuhlolwa-Ingxenye ------ ingxenye ------ indawo ------ ukuqeda-Ikhwalithi ------ yokuhlola-Assembly-Quality ------ ukuhlolwa-Ukupakisha.
Main Export Izimakethe
I-Asia, i-USA, iMid East / i-Afrika, iYurophu, i-Australia, ne-India.
I-FOB Port: ININGBO
Isikhathi Ukuhola: 45-60days.
Iphakheji ejwayelekile: Ibhulashi ngalinye elinesikhwama senayiloni esivulekile. 12PCS / ibhokisi langaphakathi.120PCS / ibhokisi.
Indlela yokukhokha: 30% T / T idiphozi kusengaphambili, ukukhokha ibhalansi ngokuqhathanisa nekhophi ye-B / L ngemuva kokuthunyelwa.
Amabhulashi ezinwele ze-Detangler asebenzisa ama-Intelliflex bristles akhethekile agobayo futhi agobekayo ukususa amafindo ngaphandle kwamandla. I-Detangler hair brush isebenza kahle ngezinwele eziqondile, izinwele ezisontekile, izinwele ezondile, izinwele ezijiyile, izinwele ezilimele, ama-wigs, kanye nezandiso. Ingasetshenziswa kuzinwele zombili ze-WET noma EZOMILE ezinokwephuka okuncane. Ama-bristles e-intelliflex angahlukanisa ngobumnene ngisho nethanga eliqinile kunawo wonke ngaphandle kokuklebhula, ukugoqa noma ukudonsa. Ishiya izinwele zibukeka zicwebezela futhi zisilika nge-frizz encane. I-Detangler hair brush yakhelwe ngokukhazimulayo ukunciphisa izinhlungu nokuvikela izinwele ekuqhekekeni. Ikuvumela ukuthi ugeze ngamandla amancane ukuze ukwazi ukunaka ngomonakalo omncane ezinweleni zakho. Ibhulashi lezinwele ezimanzi alifani namabhulashi ajwayelekile asebenza ngokumelene nezinwele, ukuxubha amafindo Ibhulashi lihlehlisa ngobumnene izingqimba ezinzima kakhulu zesipiliyoni esingenabuhlungu ngamandla amancane ukuze ukwazi ukunqanda ukulimala okuncane ezinweleni zakho. Amabhulashi aguquguqukayo ebhulashi ahle kakhulu kubantu abadala nezingane ezinamakhanda amathenda noma abucayi. Ama-bristles ayingqayizivele angahlukanisa ngobumnene ngisho namathanga anzima kakhulu ngaphandle kokuklebhula, ukugoqa noma ukudonsa. Ngenkathi amabhulashi ajwayelekile esebenza ngokumelene nezinwele, ngokuyisisekelo adabula futhi akhiphe izinwele ezifinyiwe esikhundleni sokuzinqanda. Ama-bristles angathunyelwa imiyalezo ku-4-5N yokuqina kokuqina okwamanje.
Sinezimo ezihlukile ebesingazenza nge-detangler. Futhi kungaba nomphumela ohlukile wokuqeda. Ukumbozwa kwerabha, ukudluliswa kwamanzi, ukudluliswa okushisayo, ugesi we-UV, ukudweba okukhanyayo konke kuyatholakala.
Langaphambilini Ukumbozwa kwerabha, ukudluliswa kwamanzi, ibhulashi lezinwele likagesi le-UV elinomshini oguquguqukayo
Olandelayo: UV kagesi, ukudluliswa kwamanzi, ukukhanyisa izinwele zokuphrinta izinwele ngesibambo esenzelwe
I-Boar Bristle Hair Brush
I-Boar Hair Brush
Hlobisa Izinwele Ibhulashi
Izinwele Ibhulashi Bristles
Izinwele Ibhulashi Setha
I-Rose Gold Hair Brush
Ngokhuni Rolling Izinwele Ibhulashi